Yaxye Maxamed Abubakar | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qofka bani aadamka ah waa noole bulshaawi ah dabeecd ahaan, kaasoo u baahan inuu lanoo laado oo la dhaqmo dadka, lamacaamulidda dadka waa xirfad muhiim ah, sidoo kale waa farshaxanimo uu qofku lee yahay, maxaa yeelay? Taas waxaa u sabab ah kala duwanashaha dabeecadaha iyo dhaqamada, taas oo ka dhigeysa habka qancinta iyaga iyo helitaanka ixtiraam kooda, balse waxaa lagu gaaraa arinkaa geedi socod adag oo u baahan tallaabooyin iyo xirfado dhaqameed. Saameynta xiriirka wanaagsan ee uu lalee yahay dadka ayaa laga dheehan karaa qofnimadiisa marka hore, maxaa yeelay? waxaad dareemi kartaa jaceylka iyo sida ay ugu tartamayaan saaxiib tinimadiisa …
Waxaa iska hoogay kii dadka kula hadlaa hadal been ah si uu uga xaraabeeysto “uga qosliyo” wuu hoogay! oo wuu hoogay! Mohamed SCW Mid kamid ah dhaacwayada carrabka ee ugu halista badan ayaa ah xumaanta beenta, waana mid kamid ah waxyeelada ugu xun, iyo tan ugu khattarta badan, maxaase aan u daneynaa? Beentu waa wadada ugu dhaw ee cadaabta Eebbe lagu muteysto, taas oo ah sheegidda Beenta. Waxaa soo arooray Aayado quran iyo Axaadith Nabiga ka sugnaaday kuwaas oo reebaya Beenta, sidoo kale beentu waxey kamid tahay tilmaamaha ugu xun ee qof ku sifoobo ee Eebbe uu u diyaariye ciqaab …
“waan heesay balse waan ku cunta waayey” Waayadii hore waxaa jiray, tuke ku noolaa keyn aad u fog, keyntane waxaa ka buuxay geedo, dhulkana waxaa ku xar dhanaay ubaxyo aad u qurux badan. Tukahaan wuxuu ka duwanaay kuwa kale oo wuxuu ahaay mid ka wanaagsan kuwa kale ee ibna’aadamka hilibka ka xada, sidoo kale wuxuu ahaay mid leh cod aad u fool xun, xayawaanada oo idilne way necba naayeen codkaan, sidaa ayuune u noolaay kaligiis. Maalin maal maha kamid ah ayaa dawaco aad u gaajeysan soo ag martay geed uu saran yahay tukahaan, tukuhu ne uu afka ku sito cad …
“Waxaan e heeyn kuwa dulleysan kadibne islaamka ayaa nawanaajiye , hadii aan sharaf karaadinno meel aan islaamka eheyn waan dulloobeynaa” Horaantii sanadkii shan iyo tobnaad ee hijriga, ayaa lawariyey qiso dhax martay Omar in khattaab iyo hogaamiyihii u talinaaye Bayt Al-Baqdas “Qudus” , isla markaasne la doonaaye in fura yaasha Qudus lagu soo wareejiyo khilaafada Omar uu u taliyo ayadoo wax dhiiga ah uu san daadan. Wuxuu u diray hogaami ya yaasha ciidamadda Boqorkii ka talinaaye Magaalada Qudus si ay ula soo wareegaan furayaasha Baytul Maqdas , kadib marki uu u baahday in uu amaan helo, oo dagaal lagu soo …
“Hadii aad lakali noqoto gudcur “mugdi” naftu waxey ku baaqdaa caasinimo , kaxishoo aragtida Eebbe, una sheeg in uu arkayo kii gudcurka abuuray” – Imam Al-Qahdani Waa maxay Muraaqabada alle “ilaalinta allah? Muraa qaba waa kalmad carabiyad ah micne ahaanne ah “ilaalin”. Tusaale: waa in aad wax kasta oo aad sameyneyso aad u sameysaa sida alle oo kuu jeeda taa badalkeeda ayaa ah anagu waxaanu ilaalinnaa “iska ilaalinnaa” marki aan rabno in aan waxyaabha qaar sameyno dadka markaas ina ag jooga. Akhriste waxaan maqaalkaan kuugu soo gudbin donna Halista Danbiyada qarsoodida ah Qof kasta waa inuu mararka qaar naftiisa la …
Waqtigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha qaaliga inagu ah noloshaan aduunka, sidoo kale waqtigu waa nolosha bani aadamka, sidoo kale waqtigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha hadii ay ku dhaafaan ayne suurta gal noqoneynin in ay dib kuugu soo laabtaan. Marka waxaad dareemi kartaa qiimaha uu leeyahay waqtigu, sidaa awgeed waxaanu maqaalkaan ku eegi doonnaa sida aan u maareyn karno waqigeenna, inkastoo inoo saa maxeynin in aan Waqtiga ku soo koobno hal maqaal baaxadda iyo qiimaha uu leeyahay awgeed. Nabigeena suuban NNKH wuuxu yiri “waxaa jira labo nimcood oo qiimo badan in badan oo dadka kamid ahine ay moogan yihiin waana Caafimaadka …
Maqaalkaan waxaan ku soo qaada neynaa xoogaa dhiiragalin, iyo in aan ku cibra qaadanno wixi aan nolosha tan lakulanno. Inta badan waxaan adeegsan doonaa garaadkeyga iyo wixi aan nolosha kabartay, ayadoon kamar neyn in aan oraahyadi laga yiri ciwaanka miiska inoo saarran Aan had iyo jeer qeyb kasoo qaadan doonna. Waxaan had iyo jeer u baahan nahay, in aan fiira gaara u yeelanno wax kasta oo dhacaya, oo aan cashar ka qaadanno xaalad kasta iyo dhacdo kasta oo na soo marta, taas waxaad ku arkaysaa, annaga oo mar walba la tashanno dadka khibradda iyo aqoonta u leh casharada iyo wacdinta …
“Orod oo aad ninki aad dulmisay, oo cafis weydiiso arinkaan waa ciqaab xagga Eebbe kaaga timid”. Waxaa lasoo wariey dhacdo dhacday xiligii Nabi Muse cs , kuna dhacday nin kamid ahaay reer Banii Israa’il. Waxaa jiray nin kamid ahaay masaakiintii reer Bin Israel, wuxuu na lahaay qoys, waxeyna shaqadiisu eheyd Kallun dabte oo Badda ayuu quutkiisa udoona jiray, si uu u maareeyo quutka Ehelkiisa. Maalin ayuu ugaar u baxay, wuxuuna tuurtay shabaqi uu kalluunka ku daban jiray, waqti kadib waxaa shabaqi soo galay kalluun aad u weyn, ninkii aad uyuu ugu farxay, wuxuuna soo baxsaday kalluunkii , suuqa ayuuna geeyey, …
“Dadka qaar baa dhintay sharaftooduna ma dhiman, qaarna way nool yihiin ayagoo dadka dhaxdooda ka dhigan kuwa dhintay” Nabigeenno wuxuu inoo sheegay in dadku labo koox noqon doonnan marki Geeridu timaaddo, mid dhibkiisa laga nastay oo adduunyadu ka nafistay iyo mid hilow iyo gal gaceyl loo qabo wanaagiisa dartii. Maalmuhu waa warqadaha camalka, waxaana waarra xaaladaha wanaagsan, fursaduhu daruurta camal ayey kuugu marayaan, qofki raaca gaadiidka caajiska inbadan wuu dambbeyn. Hadii ay se kulmaan caajiska iyo dib u dhigidda, waxaa ka dhasho qasaarro aan lasoo koobi karin. Waxaa jira camallo u haraaya Adoonka Geeridiisa kadib, marki uu katago Dunidaan …